China Potassium Bromide Ukwenziwa kunye nefektri | Isihloko
Igama lesiNgesi: Potassium Bromide
Izithethantonye: Bromide Ityuwa yePotassium, KBr
Ifomula yeMichiza: KBr
Ubunzima beMolekyuli: 119.00
Indawo yokunyibilika: 734 ℃
Indawo yokubilisa: 1380 ℃
Ukunyibilika: ukunyibilika emanzini
Ubunzima: 2.75 g / cm
Inkangeleko: yikristale engenambala okanye umgubo omhlophe
HS IKHODI: 28275100
Iimpawu zePhysical and Chemical
Iipropathi zomzimba (Solid Potassium Bromide)
Ubunzima beMolar: 119.01g / mol
Inkangeleko: ikristale emhlophe umgubo
Ubunzima: 2.75g / cm3 (yomelele)
Indawo yokunyibilika: 734 ℃ (1007K)
Indawo yokubilisa: 1435 ℃ (1708K)
Ubunyibilikisi emanzini: 53.5g / 100ml (0;); Ubunyibilikisi yi-102g / 100ml yamanzi kwi-100 ℃
Inkangeleko: I-cubic crystal engenambala, ayinasongo, ityuwa kwaye iyakrakra. Jonga ukukhanya ngokulula, tyheli kunye ne-hygroscopicity.
I-potassium bromide yinto eqhelekileyo ye-ionic kwaye ayithathi cala emva kokunyibilikiswa emanzini.Isiqhelo esetyenziselwa ukubonelela ngeebron bromide - Isilivere yebromide yokusetyenziswa kweefoto inokuveliswa ngezi mpendulo zilandelayo:
I-KBr (aq) + AgNO3 (aq) → I-AgBr (s) + i-KNO3 (aq)
I-bromide ion Br- kwisisombululo esinamandla sinokwenza indawo enezinto ezithile zesinyithi, ezinje:
I-KBr (aq) + CuBr2 (aq) → K2 [CuBr4] (aq)
Ukucaciswa kwePotassium Bromide:
Uvavanyo (njenge KBr)% ≥
Isulphate (njenge-SO4)% ≤
Ikloridi (njengeCl)% ≤
Iodide (njengoko ndingu%) ≤
I-Bromate (njenge-BrO3)% ≤
Heavy metal (njengoko PB)% ≤
Intsimbi (njenge-Fe)% ≤
Ukuhanjiswa nge-5% kwi410nm
Amava e-Deoxidize (kwi-KMnO4)
obomvu awutshintshanga ngaphezulu kwesiqingatha seyure
1) Uvavanyo lwe-Electrolysis Indlela
Ngaba i-potassium bromide kunye ne-potassium hydroxide synthesis ngamanzi acocekileyo ukunyibilika kwi-electrolyte, ibhetshi yokuqala yeemveliso ezingafunekiyo, i-electrolytic emva kwe-24 h emva kwe-12 h ithatha irhabaxa, imveliso erhabaxa ihlanjwa nge-distillation hydrolysis emva kokususwa kwe-KBR, yongeza isixa esincinci se-potassium hayidroksayidi yohlengahlengiso lwexabiso le-pH eli-8, isicoci se-insulation emva kwe-0.5 h, iya kucacisa ifiltrate kwi-crystallizer kunye nokupholisa phakathi kwigumbi lobushushu, i-crystallization, ukwahlula, ukomisa, i-potassium bromate yenziwe yimveliso.
2) i-chlorine oxidation Misimilo
Emva kokuphendula kobisi lwe-lime kunye ne-bromide, i-chlorine igesi yongezwa kwi-chlorine oxidation reaction, kwaye impendulo yaphela xa ixabiso le-pH lafikelela kwi-6 ~ 7. Emva kokususwa kwe-slag, i-filtrate iyaphuma. imvula ebromate, kunye nemvula ecociweyo imisiwe ngamanzi ukugcina iqondo lobushushu elithile kwaye yongezwa kwi-potassium carbonate yokuphendula kabini ukubola. I-crude potassium bromate ihlanjwa ngesixa esincinci samanzi afihliweyo kangangezihlandlo ezininzi, emva koko icocwe, yenziwe ngumphunga, ipholile, idityaniswe, yahlulwe, yomile kwaye ityunyuziwe ukulungiselela iimveliso ze-potassium bromate.
3) Bromo-Pioyile Hydroxide Misimilo
Nge-bromine yoshishino kunye ne-potassium hydroxide njengezinto ezibonakalayo, i-potassium hydroxide yachithwa kwisisombululo kunye namaxesha angama-1.4 ubunzima bamanzi, kwaye i-bromine yongezwa phantsi kokunyanzeliswa rhoqo. Xa i-bromide idibaniswa kwisixa esithile, iikristali ezimhlophe ziyancipha ukuze zifumane i-potassium bromate krwada.
Qhubeka ukongeza i-bromine de i-liquid ibe pink. kwaye yongeza inani elincinci le-potassium hayidroksayidi yokususa i-bromine egqithileyo ngexesha lokudityaniswa, liphinde lafakwa kwakhona, ekugqibeleni lakhupha i-crystallization, yomile, imveliso egqityiweyo.
I-1) Icandelo lezinto ezisetyenziselwa ukwenza iifoto ezisetyenziselwa ukwenziwa kwefilimu yokujonga iifoto, umphuhlisi, iarhente yokuqina engakhiyo, itoni kunye nombala wearhente yokufota;
2) Isetyenziswa njengesixhobo sokuthomalalisa imithambo-luvo kwezamayeza (iipilisi ezintathu zebromine);
3) Isetyenziselwa uhlalutyo lweekhemikhali reagents, ukubonwa okubonakalayo kunye nokuhanjiswa kwe-infrared, ukwenza isepha ekhethekileyo, kunye nokukrolwa, iligragraphy kunye neminye imiba;
4) Ikwasetyenziswa njenge-reagent yohlalutyo.
Gwema ukungenisa okanye ukungenisa, kwaye thintela ukudibana namehlo kunye nolusu, ukuba utyile, isiyezi kunye isicaphucaphu kuya kubakho. Nceda ufune unyango ngokukhawuleza ukuba uphefumle, ukuhlanza kunokwenzeka. Susa isigulana kumoya ococekileyo kwangoko kwaye ufune unyango. Ukuba uthe watshiza emehlweni, kwangoko hlamba ngamanzi acocekileyo angama-20min; Ulusu oludibene ne-potassium bromide kufuneka lucocwe ngamanzi amaninzi.
UkuPakishwa koGcino kunye noThutho
Kufuneka itywiniwe yomile kwaye igcinwe kude ekukhanyeni.Ipakishwe kwiingxowa ze-PP ezifakwe iingxowa ze-PE, i-20kg, i-25kg okanye i-50kg inetha nganye. Kufuneka igcinwe kwindawo yokugcina umoya, eyomileyo. Ukupakisha kufuneka kugqitywe kwaye kukhuselwe kubumanzi kunye nokukhanya. Kufuneka ikhuselwe emvuleni naselangeni ngexesha lokuhamba. Yiphathe ngononophelo ngexesha lokulayisha kunye nokothula ukuthintela umonakalo wokupakisha. Kwimeko yomlilo, isanti kunye nezitshizi zokucima umlilo zinokusetyenziselwa ukucima umlilo.
Egqithileyo Magnesium chloride
Okulandelayo: Isoda Ash
Ulwelo lweCalcium Bromide, Calcium Bromide Anhydrous, IHydrosulfite De Sodium, Isisombululo seCalcium Bromide, IHydrosulfite, Natrium Hydrosulfite,